I-Apple yazisa iSitishi F ukunceda abaphuhlisi be-App | Ndisuka mac
I-Apple yazisa ngesitishi F ukunceda abaphuhlisi beApp
Njengoko besiphawule izolo, UTim Cook useFransi kuhambo lweshishini. Izolo udibene noMongameli weRiphabhlikhi yaseFrance, u-Emmanuel Macron, eParis, emva kosuku olupheleleyo lweziganeko nokubonakala koluntu.
Kuyabonakala, njengoko kuqinisekisiwe IMac4Ever, IApple ingakulungela ukunceda "Isitishi F", Elinye lamaziko amakhulu okuqalisa ehlabathini, ngenjongo yokuxhasa ukukhula kwezicelo kwilizwe elingummelwane. UCook uzokusebenzisa ithuba lobukho bakhe eParis ukugqiba ukujikeleza imiphetho yesi sivumelwano sentsebenziswano.
Ngokomthombo, I-Apple iya kuhambisa iqela elincinci kwifowuni "Isitishi F", ukunceda abaphuhlisi abakhoyo kwindalo kunye nakwizigaba zolawulo lwezicelo ezinokuphehlelelwa kwinqanaba elikhulu kwiVenkile ye App.
Ezinye zeziqalo zesifukamisi "Isitishi F" Sele befumana inkxaso kwiinkampani ezinje ngeMicrosoft, Facebook naku-Ubisoft. Uluvo luka-Apple kukunceda iqela elenza lonke iziko, hayi ii-Starups ezithile. IMac4Ever iqinisekisa iindaba ngolu hlobo lulandelayo:
«Ngokolwazi lwethu, iApple yayiza kuvula- ubuncinci ekuqaleni- iseli elisemthethweni kwelinye lamaziko amakhulu okukhusela oosomashishini kuyo yonke iYurophu. Asizazi zonke iinkcukacha okwangoku, kodwa uApple uceba ukuhambisa iqela elincinci, ukunceda abaphuhlisi, ngakumbi ekudalweni nasekuqinisekisweni kwezicelo.
Sele kuqale unyaka we-2017, I-Apple ivule i-incubator yayo e-Bangalore, eyakhelwe ukuxhasa italente yobunjineli eIndiya kunye nokuqhuba ukukhula koluntu lwe-iOS kweli lizwe. Ukusukela ngoko, inkampani ikhulile kwaye ubukho bayo kwilizwe laseAsia liyakhula.
Ukubandakanywa kweApple kwiprojekthi enje "Isitishi F" inokunceda ukwandiswa kwentengiso kulo mbandela, kwaye iya kubonelela ngemisebenzi emininzi kwilizwe leGallic.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple yazisa ngesitishi F ukunceda abaphuhlisi beApp
Iziko ledatha elizayo laseIreland, elisesemoyeni, lixhaswa ngabantu abangaphezulu kwama-300
I-Dropshelf kunye ne-Super Eraser Pro, ii -apps ezimbini ekunikezelweni nge-euro ezimbini kuphela